Makoto Furukawa – Cast – MMANIME
Akashic Records of Bastard Magic Instructor Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records Info Anime Title: Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records Japanese: ロクでなし魔術講師と禁忌教典 Genres: Action, Magic, Fantasy, School Type: TV Status: Finished Airing Episode: 12 Airing: Apr 4, 2017 to Jun 20, 2017 Season: Spring 2017 Studio: LIDENFILMS Duration: 24 min per ep Score: 7.25 Synopsis: Download Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records 720P Mediafire
By the Grace of the God Genres: Adventure, Fantasy, Slice of Life Review Ryouma Takebayashi ဟာ အ သကျ ၃၉ နှဈ အ ရှယျ မှာ ကံ ဆိုး ပွီး သေ ဆုံး ခဲ့ ပါ တယျ.. . ဒါ ပေ မဲ့ ကံ ကွ မ်မာ စောငျ့ နတျ ၃ ဖျော က သူ့ ကို သ နား ပွီး မှျော အ စှမျး တှေ နဲ့ အ တူ ပြျော ရှငျ စ ရာ ဘ ၀ အ သဈ စ, စေ ခဲ့ ပါ တယျ . အဲ့ ဒါ အ ...
Kaguya-sama: Love is War Kaguya-sama: Love is War Translator - Isshiki Types - Comedy,Physcological,Romance,School,Seinen Kaguya Shinomiya နဲ့ Miyuki Shirogane တို့ဟာ နာမည်ကြီးအစဉ်အလာရှိခဲ့တယ့် ကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ ထိပ်တန်းအတော်ဆုံးကျောင်းကောင်စီအသင်းဝင်ကျောင်းသား၂ ယောက်ပါ တကယ့်အတော့်အတော်ဆုံးကျောင်းသား ၂ ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အမြဲတမ်း ပထမ နေရာအတွက်အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးယှဉ်ပြိုင်နေကြပါတယ် ဒီလိုနဲ့ သူတို့ ၂ ယောက်ဟာတစ်ယောက်အတွက် တစ်ယောက်ကိုယ်စီ ရင်ထဲမှာခံစားချက်တွေဖြစ်တည်လာပါတယ် အရင်ဖွင့်ပြောတဲ့သူဟာရှုံးသွားမယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက် အဲ့နေ့ကစပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အရင်ဖွင့်ပြောလာအာင်တိုက်တွန်းဖို့ အကွက်ကျကျဥာဏ်ဆင်ပါတော့တယ်..... Season 1 EP-1 to 12 Download Here (Mediafire) Season2EP-1 Download EP-2 Download EP-3 Download EP-4 Download EP-5 Download EP-6 Download EP-7 Download EP-8 Download EP-9 Download EP-10 Download EP-11 Download EP-12 ...
TMDb: 9/10 119 votes
Aldnoah.Zero S2 Overview In 1972, the Apollo 17 mission discoveredahypergate to Mars on the surface of the moon. Soonawar breaks out between Earth and Mars, and Martian soldiers begin to descend from the sky, riding steel giants, intent on exterminating humanity. Mediafire Download Link ⬇️ Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode 10 Episode 11 Episode 12 (End)
Vinland Saga Number of episode: 24 Release date: July 8 2019 Studio: Wit studio Generes: Action, adventure, historical, drama, seinen. Download Links Ep1 : here Ep2 : here Ep3 : here Ep4 : here Ep5 : here Ep6 : here Ep7 : here Ep8 : here Ep9 : here Ep10:here Ep11:here Ep12:here Ep13:here Ep14:here Ep15:here Ep16:here Ep17:here Ep18:here Ep19:here Ep20:here Ep21:here Ep22:here Ep23:here Ep24:here ________________End_______________________
Fate/Apocrypha Fate/Apocrypha Apocryphaကတော့ Fuyuki Third Holy Grail Warမှာခှဲထှကျသှားတဲ့timelineပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီtimelineမှာ Einzbernတှကေ Avenger(angra mainyu)အစား Ruler(Amasuka Shirou)ကို summonခဲ့ပါတယျ။Third warထဲမှာ lancer ရဲ့ masterဖွဈတဲ့ Darnic Prestone Yggdmillenniaဟာ နာဇီတှရေဲ့အကူအညီနဲ့ Greater grailကိုမသှားပါတယျ။ 2000ခုနှဈပတျဝနျးကငျြလောကျအရောကျမှာတော့ Yggdmillenniaတှဟော Mage' association ကနခှေဲထှကျပွီး Great holy grail warကိုကငျြးပခဲ့ပါတယျ။ ဒီwarမှာတော့ mage's association ဘကျက servant7ကောငျနဲ့ Yggdmillenniaဘကျက servant7ကောငျ ဆငျ့ချေါပွီးခကြွပါတယျ။ ထို့အပွငျ greater grail ကဆငျ့ချေါခဲ့တဲ့ Ruler(Jeanne'd arc)လညျးပါဝငျလာပါတယျ။ Episode 1 ...